Abafundi abaninzi besiNgesi banenkinga yokuqonda umahluko phakathi kweeNgesi. Oku kuvela ekubeni ininzi yeelwimi, njengesiNtaliyane nesiFrentshi kunye nesiJamani, isetyenzisiweyo esifanayo kokubili nakwii . Umzekelo, NgesiTaliyane inqaku, ndivela eMilan okanye ndivela eMilan kunokuguqulelwa njengoSono di Milano . Ukusetyenziswa kobutyebi 'kwe' ngesiNgesi kunokusebenzisa isilathiso 'di' ngesiTaliyane.
Umzekelo, ibinzana, Ungumhlobo wethu unokuguqulelwa kwisiTaliyane njengo- E un amico di noi.
Ngamanye amazwi, isilathiso sokuthi 'di' ngesiTaliyane sifana nokusetyenziswa kokubili nakwiNgesi. Oku kuyinyaniso kwiilwimi ezininzi. NgesiNgesi, nangona kunjalo, kukho umehluko ohlukileyo phakathi kunye nokusukela .
I-asetyenziswa ngokubanzi njengezinto eziphathekayo. Umzekelo:
Umbala wendlu ubomvu.
Kubalulekile ukukhumbuza ukuba kuqhelekileyo ukusebenzisa isixhobo somnini okanye isichazi esinesiNgesi, kunokusebenzisa 'ye'-nokuba nokuba' ka 'kukuchanekileyo ngegrama. Ngaloo ndlela, izivakalisi ezilapha ngasentla ziya kubakho kwezi fom:
Iimpapasho eziqhelekileyo nge-'O''zo zonke / zombini
Kuye kusetyenziswa ngokuqhelekileyo kunye 'konke' kunye 'kokubili' ukuchaza umgangatho oqhelekileyo wokuba izinto ezininzi zabelana. Umzekelo:
Bonke abafundi eklasini banandipha i-volleyball.
Zomibini zabelo zifuneka ekupheleni kweveki.
Iimpawu eziqhelekileyo nge 'Of' - Enye yezona zininzi ...
Elinye ibinzana eliqhelekileyo elinalo 'lenye yefom + ephezulu kakhulu + isibizo esininzi + isenzi esisodwa.' Eli binzana lisetyenziswe ukugxila kwizinto ezithile ezivela kwiqela. Qaphela ukuba nangona isibizo esiluninzi sisetyenzisiweyo, ibinzana elilodwa lithatha isicaciso sesinye isenzi kuba isifundo 'Sinye se ....' Umzekelo:
Enye yezinto ezinomdla kakhulu ngomsebenzi wam abantu bantu ndidibana nabo.
Esinye sezifundo ezinzima kunami kumbalo.
Ukususela ngokuqhelekileyo kusetyenziswa ukubonisa ukuba into ethile ivela kwenye into, into ethile ivela kwindawo ethile, okanye umntu othile. Umzekelo:
UJack uvela ePortland.
Le fomula ivela kumsebenzi kaPeter Schimmel.
Le pearl ivela kwiSouth Pacific.
Ukusuka - ukuya / ukususela - kude kube
Ukususela kwinto enokusetyenziswa kwakhona kunye neziphakamiso 'ukuya' kwaye 'de' ukuphawula ukuqala nokuphela kwexesha lesenzo okanye urhulumente. Ngokuqhelekileyo, 'ukusuka ... kuya' isetyenziswe ngamaxesha adlulileyo, ngelixa 'ukusuka ... de' isetyenziswe xa uthetha ngezenzo ezizayo. Nangona kunjalo, 'ukusuka ... ukuya' kuya kusetyenziswa kwiimeko ezininzi. Umzekelo:
Ndadlala i-tennis kwizinto ezimbini ukuya kwezine ngemini ntambama.
Sidibana e-Chicago ukususela ngoMsombuluko kuze kube ngoLwesine.
Ukuqonda umahluko phakathi kunye nokusukela kunokuba lukhohlakali ekuqaleni kwabafundi be-ESL, kodwa njengamagama onke adidekileyo, ukuhluka phakathi kwabo kuyacaca ngakumbi xa kusetyenziswa.
Izibambiso zesiLwimi zesiTali: Pagare
I-French Past Past Perfect (Pluperfect): 'Le Plus-Que-Parfait'
Ukusebenzisa izivakalisi zezifundo
Unako / Unako
Oothixo kunye neentombikazi zeMfazwe
Usebenza njani ngeSreenscreen?
Abaphulaphuli beNkundla yeJava kunye nendlela abaSebenza ngayo
Ukusebenzisa i-Analogies yeLizwi
Saluer - ukubulisa, bulisa; kuthatha ikhefu
I-Sunbelt ye-Southern and Western United States
Indlela yokwenza iWebhsayithi Yakho yeFowuni ngomhlobo usebenzisa i-PHP
Umsebenzi weCassini ukuya kuSaturn